Air Canada: sidina manokana enina hampodiana kanadianina tafahitsoka any ivelany
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Canada: sidina manokana enina hampodiana kanadianina tafahitsoka any ivelany
Nanambara sidina manokana enina ny Air Canada satria mitohy ny ezaka famerenana an-tanindrazana
Air Canada dia hiasa sidina manokana enina avy any Lima, Barcelona ary Quito amin'ity herinandro ity hahafahan'ny kanadiana tafahitsoka ao Covid-19 krizy any ivelany hody. Ny sidina, miasa miaraka amin'ny Governemantan'i Kanada, dia ampahany amin'ny ezaka ataon'ny Air Canada amin'ny famerenana an-tanindrazana ireo kanadiana.
“Kanadiana an-jatony maro no voafandrika tao Però, Ekoatera ary Espaina satria ny fametrahana fepetra henjana ataon'ny mpitondra dia afaka mody any an-trano ihany. Air Kanada mihetsika hatrany amin'ny fiatrehana io krizy ara-pahasalamana manerantany io ary nanolo-tena izahay hiasa hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena, hiampita ny sisintany mankany Etazonia sy manerana Kanada hamela ny olona hiverina any amin'ny tany kanadianina haingana araka izay tratra ary hitatitra entana mavesatra entana, ao anatin'izany ny vonjy maika. Misaotra ny mpiasanay rehetra aho noho ny fahavononan'izy ireo mitohy, indrindra ireo ekipa mpiasanay izay miasa mivantana amin'ireo sidina ireo, mba hitondra soa aman-tsara ny Kanadiana, ”hoy i Calin Rovinescu, filoha sady Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Air Canada.
Air Kanada dia hiasa sidina telo eo anelanelany Toronto ary Lima. Ny fiaingana voalohany Kanada voalahatra ho Marsa 24 Hiverina ihany koa ireo Peroviana maniry hiverina an-trano. Sidina manokana roa hafa avy any Lima ny Toronto kasaina hatao izao Marsa 26 ary 27. Ireo sidina dia hiasan'ny fiaramanidina Boeing 777 misimisy miaraka amina seza 400.
Sidina avy any Quito ny Toronto hanomboka Marsa 25 amin'ny Air Canada Rouge Boeing 767 mivelatra malalaka miaraka amin'ny seza 281.
On Marsa 25, sidina iray no hiala Barcelona ho an'ny Montreal eo amin'ny Dreamliner Boeing 787 mivelatra amin'ny seza 297.
Kanadiana any ivelany tsy maintsy misoratra anarana amin'ny Global Affairs Canada hahazoana seza amin'ny iray amin'ireo sidina manokana ireo. Entanina mafy koa ireo mpandeha mba hifandray amin'ny masoivoho kanadiana eo an-toerana raha ilaina ny fanampiana maika.
Sidina mihoatra ny 1,000 amin'ny faran'ny volana martsa
Na eo aza ny fihenan'ny tambajotrany dia manohy miasa sy mitondra mpandeha an-jatony an'arivony eran'izao tontolo izao ny Air Canada. Nandritra ny herinandro lasa izay, Air Canada dia nitondra 200,000 300 mahery niverina tamin'ny sidina iraisam-pirenena sy trans-border efa nomaniny. Amin'ny faran'ny volana martsa dia mikasa ny hiasa mihoatra ny 850 ny sidina avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena ary mihoatra ny sidina XNUMX ny seranam-piaramanidina amerikana. Air Kanada dia nanambara ihany koa fa mikasa ny hitazona sidina trans-border sy iraisam-pirenena voafetra avy any amin'ny tanàna kanadiana voafantina aorian'izany Aprily 1, 2020 mitazona "tetezana an'habakabaka" maromaro hanamorana ny fivezivezena tena ilaina sy hiantohana ny fitohizan'ny fivezivezena amin'ny vonjy taitra sy ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro.